Ragga & haweenka yaa ku badan ka qarsiga lamaanaha xiriirada Isgaarsiinta? – SBC
Ragga & haweenka yaa ku badan ka qarsiga lamaanaha xiriirada Isgaarsiinta?
Posted by editor on Diseenbar 1, 2012 Comments
Lamaanaha is-qaba ama kuwa xiriir wadaaga ah ee ku haminaya inay dhistaan nolol qoys ayaa waxaa la sheegaa in qaarkood ay si gaar ah qarsoodi uga dhigtaan waxaaybo ay ka mid yihiin xiriirada dhanka E-mail-ka, fariimaha Mobile-da SMS ama qofka ay la hadlayaan.
Laakiin arintan ma ahan mid ay u siman yihiin ragga iyo haweenka, waxaana daraasad arintan la xiriirta oo la soo bandhigay lagu ogaadey in Raggu ay far dheer yihiin marka ay timaado qarsoodi ka dhigashada xiriirada dhanka Isgaarsiinta ee uu la leeyahay dad kala duwan.
Daraasad laga qaaday lamaane is qaba iyo kuwa kale oo xiriir ka dhaxeeyo ayaa waxaa lagu ogaadey in mid ka mid ah shantii Ragga ah uu leeyahay e-mail qarsoodi ah, isagoo lamaantiisa ka qariya fariimaha ugu soo dhaca ama uu ka diro sanduuqdaasi Internet-ka (E-mail-ka).
Warbixintu waxay leedahay waxyaabaha uu Ninku lamaanihiisa uu kaga qarsado fariimaha ayaa waxaa qayb ka ah in uu ka daboolo xaaladihiisa dhaqaale kala bar, laakiin daraasadu waxay leeyahay mid ka mid ah shantii Ragg ah ayaa sidan u sameeya in isagoo afaaro kale ku jira ama xiriir la leh qof kale oo aan aheyn lamaanihiisa, taasi oo uu daboolka ka saarayo qofka nolasha uu la wadaago.
Kala bar Ragga ayey la leedahay cilmibaaristan waxay leeyihiin inbox (Santuuqa Internet-ka) oo qarsoodi ah ayna dooneyn inay ogaato Lamaanihiisa, waxyaabaha Technology-da ay ku qarsanayaan.
Cilmibaaristan oo ay sameysay BullGuard waxay kaloo ku ogaadey arin kale oo la yaab leh oo ah in 77% Raggu ay masaxaan/tirtiraan (delete), fariimaha qoraalka (Text Masseges) eek u soo dhaca ama ay ka diraan mobile-ka, iyagoo taasi uga dan leh inaanay ogaan gacalisadiisa.